Bogga ugu weyn Ma ku heli kartaa Amarka Lacag Kaarka Debit? Sidee U Shaqeeya?
Haddii aad u baahan tahay inaad samayso wax kala beddelasho gaar ah adoon lacag caddaan ah ku qaadan, waxaad u baahan doontaa amar lacageed. Maqaalkan, waxaanu ku soo ururinay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato amarrada lacagaha iyo kaadhadhka lacag-bixinta, oo ay ku jiraan sida loo aqoonsado falalka khiyaanada ah.
Waa maxay Amarka Lacagtu?
A money order si fudud waa dukumeenti warqad ah oo la mid ah jeeg waxaana loo isticmaalaa lacag bixin ahaan. Taasi waa, waa beddel badbaado leh oo lacag caddaan ah ama jeeg shakhsi ah. Waxaad ku iibsan kartaa dalabka lacagta adoo siinaya lacag caddaan ah ama meel kasta oo la aqbali karo khasnajiga. Oo sidaas daraaddeed, dadka aan helin koontada hubinta caadiga ah waxay isticmaali karaan dalabaadka lacagta.
Sida qalab la aqbali karo, waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo deymaha yaryar, labadaba shakhsi ahaan iyo ganacsi. Caadiyan lacag ayaa laga qaadaa. Dalabka waa la daabici doonaa, ka bacdi, waxaad buuxinaysaa macluumaadkaaga oo aad u dirtaa ama siinaysaa qofka aad wax kala iibsanayso ganacsi.
Sidee Amarka Lacagtu U Shaqeeyaa?
Qasnajiga, waxaad u baahan doontaa inaad qeexdo cidda heli doonta amarka lacagta. Intaa ka dib, labadiina adiga iyo soo saaraha waa inaad saxiixdaan si ay u ansaxiyaan waxayna gacan ka geysaneysaa dhimista tuugada. Si aad hore ugu bixiso dalabka lacagta, waxaad aadi kartaa meel ay ka mid yihiin xafiiska boostada ee Maraykanka, Walmart, ama Western Union.
Intaa waxaa dheer, inta badan dalabaadka lacagta waxay leeyihiin xadka ugu badan ee $1,000. Xaaladda aad u baahan tahay inaad iibsato dalabyo badan, waa inaad iibsataa wax ka badan xadka lagu go'aamiyay. Ka digtoonow inaad si taxadar leh u buuxiso dalabka lacagta. Tani waa iibsi hal mar ah, markaa, waxaad u baahan tahay inaad kaydiso diiwaanno wanaagsan.
Waa maxay siyaabaha lagu iibsado dalabka lacagta?
Si aad u iibsato dalabka lacagta, waxaad u baahan doontaa inaad samayso waxa soo socda:
1. Wax kasta oo aad u baahan tahay isku dar: Halkan, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa lacag caddaan ah ama kaarka deynta, magaca lacag-qaataha ama qaataha, iyo cadadka aad rabto inaad dirto. Intaa waxaa dheer, waxaad ku bixin kartaa kaarka deynta. Dhanka kale, badanaa waxay ku kici doontaa kharash dheeraad ah.
2. Buuxi foomka: Marka laga reebo bixinta magaca lacag-bixiyaha, waxaad u baahan doontaa inaad ku lifaaqdo magacaaga iyo xaaladaha qaarkood, cinwaankaaga. Intaa ka dib, waxaad saxiixi kartaa dalabka lacagta. Ha iloobin, waa inaad hubisaa in qayb kasta oo macluumaad ah oo aad bixisay ay tahay mid sax ah sababtoo ah ma awoodid inaad beddesho macluumaadka markaad dhex socoto.
3. Hayso rasiidhka: Rasiidhka waa caddaynta dalabka lacagta ama warqadda warqadda waxayna ka kooban tahay macluumaadka aad ku bixisay dalabka lacagta.
4. Lasoco dalbashada lacagtaada: rasiidhkaga, waxaad ka heli doontaa nambar raadraac oo aad isticmaali karto si aad u caddayso in dalabka lacagta loo diray bixiyeha la soo jeediyay. Haddii ay dhacdo dhibaato aad la kulanto, la xidhiidh meesha aad ka iibsatay dalabka lacagta si aad awood ugu yeelato inaad saxdo.
Xagee lagu iibiyaa dalabaadka lacagta iyo waa imisa qiimaheedu?
Gudaha, qiimaha dalabaadka lacaguhu way kala duwan yihiin, iyadoo ku xidhan meesha aad ka soo iibsatay. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha qiimaha ayaa u dhexeeya wax ka yar hal dollar iyo shan doolar. Walmart ama wakiilka xawaaladaha, waxaad heli doontaa soo jeedin ka wanaagsan. Dhanka kale, aadista bangiga waxa laga yaabaa inay kugu kacdo kharash badan.
XIDHIIDHKA: Sida Fudud Loogu Helo Kaarka Debit Card
Intaa waxaa dheer, bixiyeyaasha qaarkood ma bixiyaan dalabaadka lacagaha caalamiga ah. Dhab ahaantii, waxaad mar walba ka heli kartaa dalabaadka lacagaha caalamiga ah ee xafiisyada boostada qaarkood, inkastoo qiimahoodu sarreeyo. Laakiin haddii aad ka hesho kaaga xafiiska boostada milatariga, waxay u badan tahay inaad heli doonto qiimo dhimis. Intaa waxaa dheer, iyadoon loo eegin goobta aad ka iibsanayso; iska hubi inaad qof ahaan u samayso.
Goorma ayay habboon tahay in la isticmaalo Amarka Lacagta?
Xaaladaha qaarkood, isticmaalka lacag caddaan ah ama jeegag shakhsiyeed waxay ku gelin karaan khatar waxaana laga yaabaa inaysan noqon habka lacag-bixinta ee la aqbali karo. Hoos waxaa ah tusaalooyin ka mid ah xaaladaha aad isticmaali karto dalabka lacagta:
1. Haddii aad u baahan tahay inaad si ammaan ah u dirto lacag: Dalabka lacagaha, si ka duwan jeegaga, uma baahna lambarkaaga bangiga. Sidoo kale, dalabka lacagtu waxa uu caawiyaa in la hubiyo in lacag bixiyahaaga oo kaliya uu isticmaali karo, si ka duwan boostada lacag caddaan ah.
2. Haddii aanad lahayn xisaab hubin: Sababtoo ah money order kaagama baahna inaad hore u bixiso, oo aanad u baahnayn akoon bangi, waxay awood kuu siinaysaa inaad bixiso lacag amaan ah.
3. Haddii aad ka welwelsan tahay in jeeggaaga la soo boodo: haddii aad haysato lacag kugu filan, amarrada lacagta lama diidi karo. Sababta oo ah waa la sii bixiyay.
4. Haddii aad lacag u dirayso dibadda: lacagaha qaar waxay ka shaqeeyaan gudaha oo kaliya, halka qaarna ay ka shaqeeyaan gudaha iyo dibaddaba. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay inaad lacag u dirto si caalami ah, waxaa laga yaabaa inaad u soo dirto adoo isticmaalaya amarrada lacagaha ee Adeegga Boosta ee Maraykanka. Waxaa xusid mudan, tan waxaa loo diri karaa ilaa 25 waddan.
Aaway Meesha ugu Fiican ee Lacag lagu Dalaci karo?
Meesha ugu fiican ee lacag lagu kala iibsado waa isla goobta laguugu soo saaray...waxay noqon kartaa laanta bangiga, xafiiska boostada, ama hay'ad kasta. Marka taas laga tago, haddii aad haysato lacag aanad isla markiiba u baahnayn, waxaad ka fikiri kartaa inaad ku shubto akoonkaaga bangiga.
Waxa xiiso leh, bangiyada Maraykanku waxay aqbalaan dalabaadka lacagta adeegga boostada, si la mid ah sida ay u aqbalaan jeegaga laamaha, ATM-yada, ama barnaamijyada bangiyada. Intaa waxaa dheer, ka hor inta aadan dhigin dalabka lacagta, hubi inaad saxiixdo dhabarka.
Waa maxay dariiqa loo maro haddi dalabka lacagta lumo ama uu jiro qalad meel?
Ilaa hadda lacagta dalabka lacagta aan la soo saarin oo aad ogaatay khalad, mar walba waad samayn kartaa oo aad heli kartaa beddelka ama lacag celinta. Si la mid ah, haddii aad lumiso dalabkaaga lacagta ama aad ogaato qalad, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad keento warqaddaada ama warqadda lacagta, sida ay xaaladdu tahay, ilaa heer aad wax ka iibsato.
Waxaa laga yaabaa inaad buuxiso warqado, adigoo isticmaalaya macluumaadka ku qoran rasiidkaga. Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad bixiso lacag. Ka baaraandegista dacwadaada waxay qaadan kartaa ilaa hal bil ama ka badan.
Xaaladda aadka u daran, haddii dalabka lacagtaada hore loo soo daayay ka hor wakhtiga aad khaladka ogaatay, waxaad haysataa fursad yar oo aad dib ugu soo celin karto. Taasina waa in laga qaybgeliyo booliiska.
Suurtagal ma tahay in mid ka mid ah uu la socdo dalabka lacagta?
Haddii aad u baahan tahay inaad la socoto dalabkaaga lacagta, waxa laga yaabaa inaad awoodo inaad samayso ilaa hadda rasiidkaga waa la heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, habka dabagalka ma aha mid la mid ah dhammaan soosaarayaasha. Intaa waxaa dheer, Adeegga Boostada Mareykanka, MoneyGram, iyo Western Union waxay kuu oggolaanayaan inaad la socoto dalabkaaga lacagta onlaynka iyadoo la adeegsanayo macluumaadka sida lambarka taxanaha ah ee rasiidka iyo qaddarka aad iibsatay.
Adigoo isticmaalaya rasiidka, fursada ayaa ah inaad u baahan doonto inaad xarayso codsi cilmi baaris ah si aad awood ugu hesho inaad hesho lambarka taxanaha ah ee dalbashada lacagtaada. Taasi waxay noqon kartaa waqti-qaadasho iyo qaali sidoo kale.
Tusaale ahaan, waxay ku kacaysaa ilaa $40 MoneyGram waxayna qaadan kartaa ilaa 60 maalmood si loo habeeyo. Intaa waxaa dheer, waa inaad hubisaa inaad la socoto bixiyaha saxda ah, iyadoon loo eegin meesha aad ka iibsatay.
Fiiri tan: Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabaadka, Min. Depositt
Amarada Lacagtu Ma Badbaadaan?
Haa, way yihiin. Inkasta oo ay ammaan yihiin, haddana si khiyaano ah ayaa loo isticmaali karaa. Haddaba, si aad naftaada uga ilaaliso khiyaanada dalabka lacagta, waxaad u baahan doontaa inaad samayso waxyaabaha soo socda:
1. Iska ilaali inaad shisheeyaha ku beddesho dalabkaaga lacagta: Tani ma dhici karto haddii aad ku bixin karto si elektaroonik ah ama qaab kale oo ammaan ah.
2. Iska ilaali calamada cas: Ka digtoonow arrimahan ay ka mid yihiin in lacag dheeraad ah loo diro qof sheeganaya inuu bixiyay lacag badan. Waa inaad sidoo kale ka fiirsataa tilmaamo muuqaal ah sida calaamado-biyood oo maqan ama xaddi ka badan $1000.
3. Xaqiiji sanduuqa: Haddii aadan kaash ku samayn karin amarka lacagta meesha lagugu soo saaray, waxa laga yaabaa inaad wacdo xafiiska soo saaraha, adoo isticmaalaya taleefoonkooda goobta dadweynaha si aad u ogaato in dukumeentigu sharci yahay.
Siyaabaha Kale ee Lagu Ogaado Dalabka Lacag Been Abuur ah
Kahor intaadan aqbalin dalabka lacagta, isku day inaad xaqiijiso runnimadiisa. Waa inaad raadisaa waxyaalo badan oo kaa caawinaya inaad aqoonsato mid kasta oo been abuur ah waxayna kala yihiin:
1. Baro Warqada: Amarka lacagaha ee Adeegga Boostada Mareykanka waa kuwo calaamadeysan oo loo qaabeeyay si gaar ah si looga hortago khiyaanada. Waxaad arki doontaa calamadaha biyaha ee Ben Franklin dhanka bidix, kor ilaa hoos. Sidoo kale dhanka midig ee calaamada biyaha Franklin, waxaad ku arki doontaa dun toosan oo midabyo badan leh oo leh xarafka "USPS" kaas oo laga dhex tolay kana baxay warqadda.
2. Hubi xadiga dollarka: hadii lacagta doollarku midabkeedu is bedelo waxay ka dhigan tahay in wax lagu sameeyay, taasina waxay daliil u tahay wax isdaba marin. Qadarka dollarka waa in la daabacaa laba jeer.
3. Hubi qiimaha dollarka: Dalabka lacagta gudaha kama badana $1000, halka lacagaha caalamiga ahi aanay dhaafin $700 ($500 El Salvador ama Guyana).
Akhri Sidoo kale: Bangiyada ugu Fiican ee Amaahda Shakhsiyeedka 2022
Sida Loo Soo Dalacsiiyo Dalabka Lacagaha Guriga
Ma jiraan taariikho dhacayo dalabaadka lacagta gudaha, mana ururiyaan dulsaar. Ka sokow, qaddarka saxda ah ee dalabka lacagta waa waxa aad xaq u leedahay lacag caddaan ah. Sidoo kale, waxaad lacag la'aan ku dalacsan kartaa adeegga Boosta ee Maraykanka Xafiiska Boosta kasta. Bangiyada qaarkood iyo dukaamada gaarka ah ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad lacag kaash ah qaadato.
Haddii aad doonayso inaad ku shubato dalabka lacagta ee Xafiiska Boosta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato macluumaadka soo socda:
1. Iska hubi inaadan saxiixin dalabka lacagta
2. Qaado aqoonsiga sawirka aasaasiga ah oo ay ku jiraan dalabka lacagta meel kasta oo Xafiiska Boosta ah
3. Hubi inaad ku saxeexdo dalabka lacagta miiska miiska iyo hortiisa saaxiibka tafaariiqda.
#Sida loo Hubiyo Heerka Dalabka Lacagta
Mar kasta oo aad booqato Codsiga Amarka Lacagta, waxaad had iyo jeer hubin kartaa heerka dalabka lacagta. Markaad sidaas samaynayso, hubi inaad haysatid macluumaadka saxda ah ee dalabka lacagta ee aad rabto inaad hubiso. Macluumaadkan waxaa ka mid ah:
1. Lambarka taxanaha ah
2. Lambarka Xafiiska Boosta
3. Qadarka dollarka
Meijer Money Amarka 2021: Sida ay u shaqeyso
Goorma ayaad u baahan tahay Amarka Lacag?
Xaaladaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay dammaanad qaadaan inaad u baahan tahay amar lacageed. Taas waxaa ka mid ah:
1. Marka aad u baahan tahay dhaqaale. Tani waa hab dammaanad ah oo lagu bixin karo qof
2. Haddii lagugu leeyahay shaqsi laakiin aadan doonayn inaad lacag caddaan ah ku wareegtid.
3. Haddii aad rabto inaad qorto jeeg laakiin aad rabto in faahfaahinta akoonkaaga bangiga laga fogeeyo macluumaadka aad u baahan tahay inaad bixiso.
4. Marka biilka loo baahan yahay in lagu bixiyo jeeg laakiin aanad lahayn xisaab bangi.
Intaa waxaa dheer, dalabka lacagta waxaa loo isticmaali karaa:
1. Bixi qof kasta oo u baahan dammaanad qaadka awooddaada wax bixinta
2. Bixi biil, sida kirada
3. Bixi wax iibsiga
4. Soo dir iibsi weyn adoon ogolaanin macluumaadka lagu muujiyay kaarka deynta
5. Lacag u dir qof ku jira xarunta dhaqancelinta
Ma ku heli kartaa Amarka Lacagta Kaarka Debit?
Waxaad isticmaali kartaa kaar ama lacag caddaan ah si aad ugu iibsato dalabaadka lacagta xafiiska boostada, Walmart, ama Western Union. Si kastaba ha ahaatee, mar walba laguma talinayo in sidaas la yeelo sababtoo ah kaarka deynta ayaa kuu keeni kara inaad ka gudubto akoonkaaga bangiga. Laakiin haddii aad u baahan tahay inaad internetka ku bixiso, kaarka deynta ayaa la door bidayaa.
Money order wuxuu kaa caawinayaa inaad samayso xawaalad kala duwan adiga oo aan daaha ka qaadin tafaasiisha bangigaaga. Waxaan rajeyneynaa, macluumaadka kor ku xusan ayaa kugu filan inaad ku qanciso waxaad ku samayn karto amarrada lacagta.
www.nerdwallet.com-Siday Dalabka Lacagtu u Shaqeeyaan: Waxa ay tahay inaad ogaato
21ka Shabakadood ee Maareynta Lacagta ee ugu sarreeya 2022 -ka
Waxaa laga yaabaa in dhaq-dhaqaaqaadii weynaa ay hadda wax taraya, oo aad hadda heshay kaarkaagii ugu horreeyay ee Chase, mana awoodid...
Walmart ma hubiyaa lacag caddaan ah? Tilmaan faahfaahsan
Waa la yaab sida qofku u soo jiidi karo dukaanka baabuurta, u dejin karo baabuurkiisa si uu u adeego, u qabsado…
Faallooyinka Azlo vs Novo 2022: Bangiga Ganacsiga ee ugu Fiican 2022 | Talada Khabiirka